Fahamka Caqabadaha (Iyo Niyad-jabka) ee HTML Naqshadeynta Emailka | Martech Zone
Laakiin tifaftirayaasha iimaylka ayaa si xun uga dambeeya. Waa kan sababta…
Nakhshadeynta iimaylada HTML aad ayey uga adag tahay marka loo eego mareegaha
Haddii shirkaddaadu rabto email qurux badan oo HTML ah oo loo qaabeeyey, nidaamku aad ayuu uga adag yahay dhisidda bogga shabakadda sababo badan dartood:
Heerarka Malaha - Ma jirto u hoggaansanaan adag oo shabakad kasta heerarka emaylka macaamiisha soo bandhigaya emailka HTML. Dhab ahaantii, run ahaantii macmiil kasta oo email ah iyo nooc kasta oo macmiilka email kasta u dhaqmo si ka duwan. Qaarkood waxay sharfi doonaan CSS, xarfaha dibadda, iyo HTML casriga ah. Kuwo kale waxay sharfaan hab-qaabaynta khadka, kaliya waxay soo bandhigi doonaan xarfo xarfo ah, oo ay iska indhatiraan wax kasta oo aan ahayn qaab-dhismeedka miiska loo wado. Runtii waa wax lagu qoslo wakhtigan in qofna aanu ka shaqayn arrintan. Natiijo ahaan, naqshadaynta moodooyinka ka bixiya macaamiisha iyo qalabka si joogto ah waxay noqdeen ganacsi weyn waxayna noqon karaan kuwo qaali ah.
Iimayl Badbaadada Macmiilka Toddobaadkan, Apple Mail waa la cusboonaysiiyay si loo xannibo dhammaan sawirrada emayllada HTML si caadi ah oo aan ku dhex jirin emaylka. Waxaad siisaa ogolaansho inaad ku shubto iimaylka markiiba, ama waa inaad awood u yeelataa dejinta inay joojiso dejintan. Marka ay la socoto dejinta ammaanka macmiilka iimaylka, waxa kale oo jira habayn shirkadeed.
Amniga IT - Kooxdaada IT-ga waxaa laga yaabaa inay dejiyaan shuruuc adag oo ku saabsan shayyada dhabta ah ee lagu bixin karo iimaylka. Haddii sawiradaadu, tusaale ahaan,, ay ka yimaaddaan xayndaab gaar ah oo aan ku jirin liiska dab-damiska ee shirkadda, sawiradu si fudud kama soo bixi doonaan iimaylkaaga. Mararka qaarkood, waxa aanu ku qasbanahay in aanu horumarino iimaylka oo aanu martigelino dhammaan sawirada server-ka shirkadda si shaqaalahooda ay u arkaan sawirada.
Email Bixiyeyaasha Adeegga - Waxaa ka sii daran, email-dhisayaasha adeeg bixiyayaasha iimaylka ah (gaar ahaans) dhab ahaantii mashaakil soo bandhigo intii la xakameyn lahaa. Halka ay kor u qaadaan tifaftirahooda waa Waxa aad aragto waa waxa aad hesho (WYSIWYG), liddi ku ah inta badan waa run naqshadeynta iimaylka. Waxaad dib ugu eegi doontaa iimaylka goobtooda, ka bacdi qaataha iimaylka wuxuu arkayaa dhamaan noocyada dhibaatooyinka naqshadaynta. Shirkaduhu inta badan si aan la garanayn waxay door bidaan tifaftiraha sifada hodanka ku ah halkii ay ka heli lahaayeen tafatiraha qufulan iyagoo u maleynaya in mid ka mid ah uu leeyahay astaamo ka badan kan kale. Taas lidkeeda waa run… haddii aad rabto iimaylo si joogto ah ugu soo gudbiya dhammaan macaamiisha iimaylka, waa ka fududaantooda sababtoo ah wax yar ayaa khaldami kara.
Samaynta macmiilka iimaylka - Waxaa jira boqolaal macaamiisha iimaylka ah, oo mid kastaa u siinaya HTML si kala duwan guud ahaan desktop-ka, apps, mobilada, iyo macaamiisha webmailka. Iyadoo tifaftirahaaga qoraalka ee quruxda badan ee adeeg bixiyahaaga iimaylka laga yaabo inuu lahaado dejin uu ku dhejiyo ciwaanka iimaylkaaga… suufka, marinnada, dhererka line-ka, iyo cabbirka font ayaa laga yaabaa inay ku kala duwanaadaan macmiil kasta oo email ah. Natiijo ahaan, waa inaad hoos u dhigtaa HTML oo aad u codeesaa shay kasta si ka duwan (fiiri tusaalaha hoose) - oo inta badan ku qor wax ka reeban kuwa emailka macmiilka ah - si aad u hesho iimaylka si joogto ah. Ma jiraan noocyo block oo fudud, waa inaad samaysaa jaantusyo miis ku socdo oo u dhigma dhismihii shabakada soddon sano ka hor. Waa sababta qaab kasta oo cusub uu ugu baahan yahay horumarinta iyo iskutallaabta macmiilka iimaylka iyo tijaabinta qalabka labadaba. Waxa aad ku aragto sanduuqaaga waxa laga yaabaa in ay gebi ahaanba ka duwan yihiin waxa aan ku arko sanduuqayga. Waa sababta u samaynta agabka sida Iimayl ku On Acid or Litmus Waa waajib si loo hubiyo in naqshadahaaga cusub ay ka shaqeeyaan dhammaan macaamiisha iimaylka. Waa kuwan liis gaaban oo ah macaamiisha iimaylka caanka ah iyo matoorada wax-qabadkooda:
Apple Mail, Outlook for Mac, Android Mail iyo IOS Mail isticmaalka Webkit.
Isticmaalka Muuqaalka 2000, 2002 iyo 2003 Internet Explorer.
Isticmaalka Muuqaalka 2007, 2010 iyo 2013 Microsoft Word (Haa, Eray!).
Macaamiisha Webmailku waxay isticmaalaan mishiinka browserka ay u kala horreeyaan (tusaale, Safari waxay isticmaashaa WebKit iyo Chrome waxay isticmaashaa Blink).
Tusaalaha HTML ee Shabakadda Vs. iimaylka
Haddii aad rabto tusaale muujinaya kakanaanta naqshadaynta iimaylka iyo shabakada, halkan waxaa ah tusaale ugu fiican maqaalka Mailbakery 19 Farqiga Wayn ee udhaxeeya iimaylka iyo HTML Webka:
Waa inaan dhisnaa jaantusyo taxane ah oo ka kooban dhammaan qaabaynta khadka tooska ah ee lagama maarmaanka u ah in si habboon loo dhigo badhanka oo aan u hubinno inay si fiican ugu muuqato macaamiisha iimaylka. Waxa kale oo jiri doona sumad la socota xaga sare ee iimaylkan si loogu daro fasalada.
Waxaan u isticmaali karnaa xaashida qaab dibadda ah oo leh fasallo si aan u qeexno kiiska, toosinta, midabka, iyo cabbirka summada barroosinka oo u muuqda badhan ahaan.
Sida Looga Fogaado Arrimaha Naqshadaynta Emailka
Arrimaha naqshadaynta iimaylka waxaa lagaga badbaadi karaa iyadoo la raaco habraac hufan:
Naqshadaynta Template - Samee template leh qaabab kala duwan iyo qaybo ka kooban oo ka kooban qaab kasta oo aad waligaa rabto inaad ku soo saarto naqshadaha emailkaaga. Marka aan hirgelinno macmiilka, waxaan had iyo jeer ku riixnaa iyaga u samee iimaylka mustaqbalka - kaliya maaha ololaha soo socda ee iimaylka ee la soo diray. Habkaas, waxaan si buuxda u naqshadeyn karnaa, horumarin karnaa, tijaabin karnaa, oo u hirgelin karnaa xalinta lagama maarmaanka ah ka hor weligood waxay soo direen iimaylkii ugu horreeyay.
Tijaabinta Qaababka - Fahamka macaamiisha iimaylka ee macaamiishaadu ay isticmaalayaan iyo hubinta in emailkaaga HTML si buuxda loogu tijaabiyay mobilada iyo desktop-ka waa muhiim ka hor inta aan la dirin template kasta. Waxaan u qaabayn karnaa iimaylka si dhab ah qaabka Photoshop-ka...laakin googooynta iyo googooynta miis-ku-socda, macmiilka-imayl-ku-sheeggu waa lama huraan si loo geeyo naqshadaha iimaylka ee ugu fiican oo joogto ah.
Imtixaanka Guddaha - Marka qaab-dhismeedkaaga la qaabeeyo oo la tijaabiyo, waa in loo diraa liiska abuurka gudaha ee ururka si loo eego oo loo ansixiyo. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa rabto inaad ku bilowdo shaqsiyaad aad u kooban si aad marka hore u hubiso inaysan jirin dab-damis ama arrimo amni oo la xidhiidha samaynta iimaylka gudaha. Haddii tani ay dhisayso tusaale bixiyaha adeegga iimaylka cusub, waxa laga yaabaa inaad xitaa hesho qaar shaandhaynta ama xannibaadda arrimaha la xidhiidha xataa helitaanka iimaylkaga sanduuqa-galka.
Qaabka qaabaynta – Ha beddelin qaab-dhismeedkaaga ama naqshadayntaada adigoon ku shaqayn nooc cusub oo template-kaaga ah kaas oo la qaabayn karo, si sax ah loo tijaabin karo, loona diri karo. Ganacsiyo badan ayaa jecel naqshado hal mar ah olole kasta… laakiin taasi waxay u baahan tahay iimayl kasta in la qaabeeyo, la horumariyo, oo la geeyo olole kasta. Tani waxay ku daraysaa waqti aad u badan habka suuq-geynta iimaylka gudaha. Oo, waxaad halis u tahay inaadan fahmin waxyaabaha ku jira iimaylkaagu si fiican u shaqeynayaan marka loo eego waxyaabaha aan ahayn. Joogteynta ma aha oo kaliya dariiqa lagu fududeynayo habka, sidoo kale waxay muhiim u tahay hab-dhaqanka macaamiishaada.
Ka Reeban Bixiyaha Adeegga iimaylka - Dhab ahaantii bixiye kasta oo adeeg iimayl ah wuxuu leeyahay habab uu kaga shaqeeyo arrimaha uu soo bandhigo email-dhisahooda. Waxaan badiyaa ku dari karnaa CSS cayriin koontada - ama xitaa waxaan haysanaa baloog nuxur ah oo ay tahay in lagu daro email kasta - si shirkadu u isticmaasho tifaftiraha iimaylka ku dhex jira oo aysan u jabin naqshadda iimaylkaaga. Dabcan, taasi waxay u baahan kartaa xoogaa tababar ah iyo kontorool habka si loo geeyo tillaabooyinkaas si loo hubiyo in loo hoggaansamay. Ama - waxaa laga yaabaa inaad dhab ahaantii rabto inaad horumariso naqshadda iimaylka ee xalka la xaqiijiyay inuu ka shaqeeyo dhammaan macaamiisha iyo aaladaha, ka dibna dib ugu dheji bixiyaha adeegga emailkaaga.
Iimayl Naqshad Platforms
Sababtoo ah aaladaha adeegga iimaylka ayaa sameeyay shaqo liidata xagga dhisidda iyo ilaalinta macaamiisha isdhaafsan iyo aaladaha si joogto ah wax u dhisa, tiro ka mid ah aaladaha waaweyn ayaa suuqa u yimid. Mid aan aad u isticmaalnay ayaa ah Stripo.
Stripo kaliya maaha email-dhise, waxay sidoo kale haystaan ​​maktabad ka badan 900 oo qaab oo si fudud loo soo dejin karo. Markaad naqshadayso iimaylka, waxaad iimaylka u diri kartaa 60+ ESPs, iyo iimaylka macaamiisha, oo ay ku jiraan Mailchimp, HubSpot, Kormeeraha Ololaha, AWeber, eSputnik, Muuqaalka, iyo Gmail. Waxa ugu wanagsan oo dhan ee Stripo waxa ay la socdaan imtixaanada gudbinta iimaylka oo lagu soo daray si aad u hubiso in la tijaabiyay oo ay si joogto ah uga shaqeeyaan in ka badan 40 macaamiil email ah.
Soo gal Tifaftiraha Stripo Demo
Shaacinta: Waxaan ku xidhayaa kayga shirkadda latalinta suuq geynta yaa naqshadeeya oo geeya iimaylada macmiilka isdhaafka ah ee noocyada hormuudka ah ee ku dhawaad ​​bixiyaha adeegga iimaylka. Waxaan sidoo kale la mid ahay Stripo oo waxaan isticmaalayaa iskuxirkayga maqaalkan.
Tags: gubaemail dhisemacaamiisha emailka ahnaqshadeynta emaylkaEmail Marketinghaya'ad emailtifaftiraha adeeg bixiyaha iimaylkaadeeg bixiyaasha emaylkadesign template emailImtixaanka template emailnuqulka template emailiimaylka emailkaimtixaanka emaylkaemail editor qoraalkaemaylka htmlinternet Explorerdukaamada boostadadaruuraha suuq geyntaerayga microsoftstripoxirmo shabakadwebmailwysiwyg